Junior Cashier Job at Hayman Capital Co., Ltd. in Yangon | Accounting & Finance
Junior Cashier - Hayman Capital Co., Ltd. | New Day Jobs (Yangon, Myanmar)
Easy Apply (Hayman Capital Co., Ltd.) Junior Cashier job. View job description, responsibilities and qualifications. See if you qualify!
Skills : MS Office Accounting
Hayman Capital is an investment company based in Singapore and now expanding Myanmar for establishing Microfiance Institution ( MFI ). To be the leading capital company, delivering world-class service through the blending of state-of-the-art technology and visionary management in partnership with competent and committed staff, to achieve ...
sound financial health with sustainable value addition to all our stakeholders. We are committed to do this mission while ensuring the highest levels of ethical standards, professional integrity, corporate governance and regulatory compliance.NANA
• Customer များအား ငွေထုတ်ပေးခြင်း၊
• Customer များထံမှ ပြန်လည်အပ်နှံငွေများအား သိမ်းဆည်းခြင်း၊
• ပြန်လည်အပ်နှံငွေများအား ရုံးချုပ်သို့ ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း ( သို့ ) သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်စာရင်းသို့ ထည့်သွင်း ပေးခြင်း၊
• ငွေသွင်း ငွေထုတ်စာရင်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများအား တိကျသေချာစွာ မှတ်တမ်းတင် သိမ်းဆည်းခြင်း၊
ုင်ရာ အထက်အရာရှိမှပေးအပ်သောတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ခြင်း၊ Show more >
• တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
• လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။
• Microsoft Word, Excel, Internet, Email ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
• ငွေကြေးထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရာတွင် တာဝန်ခံဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
• လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ လိုက်လျှောညီထွေဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး အသင်းအဖွဲ့ စိတ်ဓာတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။<...
br>• ကောင်းမွန်သော လူမှုဆက်ဆံရေးရှိသူ ဖြစ်ရမည် Show more